Vorona io... fiaramanidina io... Taxi an'habakabaka Seoul vaovao io!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Korea Atsimo » Vorona io… Fiaramanidina io… Taxi an'habakabaka Seoul vaovao io!
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Vaovao farany momba ny Korea Atsimo • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Vorona io… Fiaramanidina io… Taxi an'habakabaka Seoul vaovao io!
Antenaina fa hanamaivana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ao an-drenivohitr'i Korea Atsimo ny rafitra taxi-be vaovao ary hiasa amin'ny taona 2025.
Nanao sidina fitsapana tao amin'ny Seranam-piaramanidina Gimpo ao Seoul ny fiaramanidina taxi an'habakabaka vaovao.
Ny sidina ampahibemaso ny fiaramanidina dia nokasaina hatao amin'ny herinandro ho avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Incheon Seoul.
Korea Atsimo tamin'ny taon-dasa dia nanambara drafitra hamolavola fotodrafitrasa nasionaly UAM, mampiasa vola 65 tapitrisa dolara amin'ny teknolojia.
Fiaramanidina 18-rotor noforonin'ny orinasa alemà Volocopter nanao sidina fitsapana fohy tao amin'ny seranam-piaramanidina Gimpo ao Seoul ny alakamisy.
Fiadiana fiaramanidina tsy mahazatra natao ho an'ny fiarakaretsaka an'habakabaka atsy ho atsy no natao tamin'ny alalan'ny mpanamory nitondra azy eny amin'ny rivotra ary manidina izany miverina sy miverina ao anatin'ny lalan-drivotra voatondro.
Antenaina fa hanamaivana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ao amin'ny taxi-brousse vaovao Korea Atsimorenivohitra ary hiasa amin'ny 2025.
Nahatratra 3km teo ho eo ny fiaramanidina urban air mobility (UAM), nijanona teo ambanin'ny haavo 50 metatra ary nahatratra 45kph ny hafainganam-pandehany nandritra ny sidina fitsapana dimy minitra.
Ny tena tanjona amin'ny fitsapana dia ny hijerena ny fomba fiasan'ilay vondrona amin'ny tontolon'ny seranam-piaramanidina, izay tena ilaina ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka amin'ny fiasana azo antoka.
Ny maodely misy seza roa, izay mampiasa motera elektrika amin'ny fampandehanana ny propeller 18 mitovitovy amin'ny drone quadcopter, dia nanao ny sidina voalohany tamin'ny taona 2013. Ny sidina ampahibemaso ny fiaramanidina dia nokasaina hatao amin'ny herinandro ho avy any Incheon, faritra andrefana. ny Seoul Faritra Renivohitra.
Korea Atsimo tamin'ny taon-dasa dia nanambara ny fikasana hamolavola fotodrafitrasa nasionalin'ny UAM, mampiasa vola 65 tapitrisa dolara amin'ny teknolojia. Manantena ny fampandehanana fiarakaretsaka an'habakabaka ara-barotra manomboka amin'ny taona 2025 ny governemanta, hitondra mpandeha irery eo anelanelan'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Incheon sy Seoul afovoany amin'ny vidiny eo amin'ny $93 isaky ny dia – ambony noho ny taxi mahazatra. Ny vidin'ny vidiny dia antenaina hidina mihoatra ny dimy heny amin'ny 2035, rehefa ekena mora kokoa ny UAM ary tarihin'ny rafitra mandeha ho azy fa tsy olombelona.
Na izany aza, Volocopter hiatrika fifaninanana avy amin'ny UAM ao an-toerana antsoina hoe OPPAV. Ny mpamorona azy, Korea Aerospace Research Institute (KARI), dia miomana hanao sidina fitsapana prototype feno amin'ny taona ho avy.